ikhaya » Okufumaneka » HARMAN: I-Studer DIOS
HARMAN: I-Studer DIOS
The Studer DIOS I / O isistim yokwenza i-automation software yenza uphawu kwaye iimpendulo ezipheleleyo ezivela kwizakhono zorhwebo zichanekile kakhulu. I-Studer i-DIOS iyinkqubo ehlengahlengiswayo yabasasazo kunye neenkampani zeendaba ezixhomekeke kwiimveliso zokusasaza ngeenjongo zokuphelisa nayiphi na imingcipheko malunga neziseko zangoku ezikhoyo. Iinkalo eziphambili zeNtsebenzo jikelele ye-DIOS ziquka: Ukulawulwa kweendlela ze-I / O, Ukuhamba ngokuzenzekelayo, Ukukhupha i-Redundant, Izaziso zokuxilonga, Ukuthuthwa kwe-baseband kunye ne-IP idatha, Ukukhunjulwa ngokuzenzekelayo kwemizila ye-I / O yangaphambili, kunye nokukwazi ukucwangcisa okungaxhunyiwe kwi-Offline.
Inkqubo iklanyelwe ukuhluleka ukulandelwa kobufakazi kwaye i-DIOS iqinisekisa ukuba kungakhathaliseki ukuba yiyiphi impazamo eyenzekayo, inkampani yesasaza okanye inkampani yezobume izakuhlala emoyeni. Ukugxininiswa kokuvumela iinkqubo ezininzi zokutya ngokulawulwa komntu omnye kunye nencazelo yeCentral. I-DIOS iyakwazi ukulawula ukuhamba kweendlela, ukubonelela ngokuzenzekelayo, ukulungelelaniswa ngokupheleleyo kwe-I / O, nokunyusa ukusebenza nokusebenza kwenkqubo yonke yokulalelwayo. I-flexibility ye-DIOS ivumela ukuba: Yabelana ngezixhobo kwaye udibanise izixhobo zakho, Yenza umgangatho wakho wokusebenza, Ulungelelanisa ukuvelisa okukude, Ukwandisa ukwanda kwenethiwekhi yakho yomzila kwaye ungeze okanye ususe izixhobo, kwaye wenze lula utshintsho kwizixhobo, imveliso kunye / okanye italente.
"Ukuhamba kwe-I / O yinkqubo enzima kakhulu kwaye ichitha ixesha lokuvelisa, kunye nokuhluleka kwezinto ezingalindelekanga ngokuqhelekileyo kufuna ukuba utshintsho oluphuthumayo kwizinto zokusebenza zokuzama ukuhlala emoyeni," Utsho uKaty Templeman-Holmes, uMlawuli weZisombululo kunye nokuThengiswa kweSwendwe kunye nokuSasazwa, HARMAN Professional Solutions. "I-DIOS iyisebenzisela inkqubo yokujikeleza ye-I / O, eyenza abapapashi bawenze lula ukwenza umsebenzi wokuvelisa, ukunciphisa iphutha lomntu ngexesha lokucwangcisa kunye nokusebenza kwansuku zonke, kwaye uqinisekise ukuba iinkqubo zihlala emoyeni xa kwenzeka impazamo. Ngaphezu koko, u-HARMAN usebenza kunye neenkokheli zoshishino kunye nabalingani bezobuchwepheshe ukuba baqhubeke beguqukela i-DIOS ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye neemfuno zeemakethe eziguqukayo. "
Xa inkqubo yokufuduka esuka kumanethiwekhi e-baseband kuya kwi-IP eyenzekayo kwisiza sokusasazwa, i-DIOS ijonge ukuxhasa umsebenzi. Eyenziwe njenge-agnostic yefomathi, i-DIOS yenza ukuba kunikwe imimiselo eyahlukeneyo eyahlukahlukeneyo ilawulwe kwaye ihanjiswe ukwenzela ukuba indlela yokuphucula i-infrastructureband base-IP ngokupheleleyo ingadluliselwa kwisantya sebhajethi yakho ekhoyo. Okubaluleke kakhulu oku kwenza ukuba ulungelelwaniso lwakho jikelele lwezakhiwo zakho lukwazi ukuthenga.
Ukunciphisa iziphoso zokuhamba kunye nokunyuka kwempumelelo kuyinto evamile kuyo yonke inkqubo yethu yokuvelisa. Ukwazi ukuba i-DIOS iyisebenzisayo le nkqubo iqinisekisa ukuba umqondiso awusoze walahleka okanye uhlale uvela emoyeni. Ukukwazi ukufumana enye indlela xa iphutha leprogram livela kuphela umangalisa waloo mveliso. Izaziso zokuxilonga ngokuzenzekelayo zinika abaqhubi ngemida yokuhamba okanye nayiphi na ihlulo ze-hardware kunye nobuhle bayo ukuba i-DIOS iyakwenza ngokukhawuleza ukutshintshwa ngaphandle komqhubi ofuna ukuyibuyisela ukulungiswa kwakhona. Ukuba akukho zindlela ezikhoyo i-DIOS iya kunika ukhetho lomsebenzisi lokunqanyulwa komzila. Eyona nto i-DIOS yenza ukuba umsebenzisi enze okukhawulezileyo: Fumana ngokukhawuleza isisombululo seendlela, ukungaphumeleli kweehadi kunye nemibandela yokunciphisa umda we-bandwidth, Ukufumana ukuguquguquka ngeendlela zakho zokuhamba, Ukunciphisa imizamo yokuqala yokuqwalasela echaphazelekayo kwiinkqubo zolawulo lwe-studio ye-third party, Vuka uphume ngokukhawuleza Uqeqesho oluncinane njengabaqhubi abafunwa ukuba babe yiingcali kwiindlela ezahlukeneyo zokufaka izicelo. I-DIOS iya kufumaneka kwi-2017. Ukuze ufunde kabanzi, tyelela Studer DIOS iphepha lomkhiqizo.
Abantu abangaphezu kweBillion balaphula i-Studer okwangoku
I-Studer ikwasezantsi kweLondon e-UK nge-distribution globally, ukuthengiswa kunye nenkxaso yenhlangano. Ukususela kwisiseko sawo nguWilliard Studer kwi-1948 kufuphi neZurich eSwitzerland, i-Studer iye yaba yinkokeli yehlabathi kwiinkqubo zokuxuba idijithali ye-Broadcasters, i-Theatre kunye neNdlu yoNqulo lwezonxibelelwano. Inhlangano ye-R & D; Udidi oluyingqayizivele lwamava kunye neenjineli ezincinci ezintsha zitshintshe imingcipheko yokulalelwa kwemisindo kunye nomsebenzisi ukususela kwiziseko zabo eSwitzerland, e-UK, eTshayina naseIndiya, bonke benenjongo enye engqondweni-ukuba banqabile ukulindela abathengi bethu.
Ukulandela ukuqaliswa kweemveliso eziqhelekileyo ezifana nomshini we-J37 kumatshini we-1960 kunye ne-D950 console yedijithali kwi-90s, i-Studer iye yaphayona i-interfaces ephezulu kakhulu yomsebenzisi kwi-audio industry; Kunye nobuchwepheshe obufana neVistonics enegunya lobunikazi kunye neFaderGlow, i-brand iyafana ngokulula ukuyisebenzisa, ukuxubusha okulula ukufundiswa, ukuxhuma kunye nekhwalithi, konke okuxhaswa ngabaxhasi belizwe kunye nenkxaso yoqeqesho.
Namhlanje, i-Studer inikeza iinkqubo ze-Vista Infinity, ezakhelwe ngokuchanekileyo kwiinkcukacha zabathengi kwaye zikwazi ukulawula ukusasazwa kwezona zinto zinkulu kunzima kakhulu, kumzekelo, i-Infinity pro processor inokunikela ngeendlela ze-1,500 ze-optical mali ngokusebenzisa uxhumano olulodwa, ukunika amandla kwii-5,000 iziteshi Ye-I / O kwindawo enye. KwiRadiyo, umgangatho osisiseko kunye neshishini kwiAreir range yeeromedikhi yedijithali kunye neengqungquthela zomsindo zomsindo zinika uluhlu olubanzi kunxibelelwano kunye neenketho ze-AoIP.
KwiStuder, ifilosofi yethu kukuzama ukuqhubeka nokufezekiswa ngokuyila ngokutsha, ubunjineli obuphambili kunye nekhwalithi ye-inbuilt. Imiphumo yomnatha yale ndlela kukuba sinikezela abathengi bethu ngemveliso entsha kunye noqeqesho oluthile. Siyifumene le njongo ngokuphulaphula abathengi bethu nokufezekisa iingcamango zabo, kunye nezinye ezimbalwa zethu!
Kule ndlela siye sanikeza izixhobo ezigqwesileyo zokufikelela kumazinga amatsha aphezulu xa kuveliswa iinkqubo, imiqondiso kunye neenkonzo.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Inkqubo yoLawulo Iilori zangaphandle ezisasazwayo Injini yeVidiyo	2017-08-17
Previous: U-Artel usungula iBhodi yeBhunga labacebisi
next: Phillip Grossman Goes Into The okungayi Zone!
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "HARMAN: I-Studer DIOS". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/harman-the-studer-dios/. Enkosi.